Vaksiny - princetoncovid.org
Fanavaozana ny fanaovam-baksiny
Fampahalalana bebe kokoa momba ny vaksinina
Vaksinina Pfizer Azo alaina amin'ny 16 sy 17 taona
Ny departemantan'ny fahasalamana Princeton dia niara-niasa tamin'ny tanànan'i Hamilton, Towns West Windsor ary Olden Pharmacy hanome toeram-pitsaboana vaksinin'ny Pfizer ho an'ny ankizy 16 sy 17 taona eo an-toerana. Anisan'izany ny mahafeno fepetra: Ireo mipetraka, mianatra na miasa any Princeton Tsy mbola nahazo vaksinin'ny COVID-19 (ary tsy mbola manana fotoana fanendrena) Afaka manatrika […]
Vakio bebe kokoa: Vaksinin'ny Pfizer azo alaina 16 sy 17 taona
Princeton Health, ekipan'ny YMCA ho an'ny toeram-pitsaboana vaksinin'ny 29 aprily
Ny Departemantan'ny Fahasalamana Princeton dia hanao tobim-panafody vaksinin'ny COVID-19 ao amin'ny Princeton YMCA ny alakamisy 29 aprily manomboka amin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny atoandro. Ny olona 18 taona no ho miakatra dia afaka misoratra anarana amin'ny tobim-pitsaboana eto. Hikatona ny fisoratana anarana rehefa vita ny doka 80.
Vakio bebe kokoa: Princeton Health, ekipan'ny YMCA ho an'ny toeram-pitsaboana vaksinin'ny 29 aprily
Fanavaozana ny vaksiny 1 martsa; miantso mpiasa an-tsitrapo
Ny Governora Murphy dia nanambara androany fa i New Jersey dia hahazo fatra 70,000 amin'ny vaksinin'ny COVID-19 vao nekena tamin'ny faran'ity herinandro ity. Nanitatra ny torolàlana ihany koa ny fanjakana ho an'izay mendrika handray vaksinina manomboka ny 15 martsa, ireto vondrona manaraka ireto dia hahazo ny vaksiny COVID-19: Mpanabe, ao anatin'izany ireo mpiasa mpanohana, ao amin'ny Pre-K-12 […]
Vakio bebe kokoa: Fanavaozana ny vaksinin'ny 1 martsa; miantso mpiasa an-tsitrapo
Fanavaozana ny vaksinin'ny departemantan'ny fahasalamana
Amin'izao fotoana izao dia tsy misy fanendrena ho an'ny fatra voalohany misy amin'ny alàlan'ny Departemantan'ny Fahasalamana Princeton. Aza miantso na mailaka manontany momba ny fotoana voatondro. Raha efa voalahatra ho an'ny doka faharoao ianao miaraka amin'ny Departemantan'ny Fahasalamana Princeton, dia mbola handray io fatra faharoa io amin'ny daty voatondro. Mbola voafetra ny famatsiana vaksinina. Princeton dia […]
Vakio bebe kokoa: Fanavaozana ny vaksinin'ny departemantan'ny fahasalamana
Ny Diviziona Fahasalamana Mercer County dia nanambara tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity fa nanao fanovana kely tamin'ny fizarana vaksinina mifototra amin'ny torolalan'ny Departemantan'ny fahasalamana ao amin'ny NJ. Azafady tsindrio eto raha mila fanavaozana ny vaksinin'ny 10 Febroary. ** Azafady mba mariho: Raha manana doka faharoa voalahatra miaraka amin'ny Departemantan'ny Fahasalamana Princeton ianao dia hahazo izany fatra izany […]
Read More: Nanambara ny fanovana ny fizarana vaksininy ny County
Fanavaozana ny vaksiny 8 feb
Nampahafantarin'ny fanjakana ny kaomina ao amin'ny tanànan'i Mercer County fa mandritra ny tsy fisian'ny vaksinina ankehitriny dia tsy hanome vaksininy any amin'ny tobim-pitsaboana monisipaly intsony izy ireo. Vokatr'izany, ny tobim-pahasalamana tazomin'ny Sampan-draharahan'ny Fahasalamana Princeton sy ny sampana fahasalamana monisipaly hafa ao amin'ny faritr'i Mercer dia hapetraka amina fijanonana vonjimaika manomboka ny 13 feb.
Vakio bebe kokoa: Fanavaozana ny vaksiny 8 feb
Ny farany momba ny vaksiny avy amin'ny Princeton Health Dept.
Read More: Ny farany momba ny vaksiny avy amin'ny Princeton Health Dept.
Manomboka ny vaksiny any amin'ny Faritr'i Mercer
Manomboka ny vaksiny any amin'ny faritr'i Mercer County. Betsaka ny vaovao momba ny fizotran'ny fanaovana vaksiny hiarovana amin'ny aretina COVID-19 sy ny ezaka ataon'ny eo an-toerana amin'ny famoahana ilay vaksiny. Ny fivezivezena, amin'ny sehatra nasionaly dia nihaona amina fantsom-pamokarana sy olana ara-logistika hafa, saingy eo an-toerana, amin'ny ambaratonga kely kokoa misy antsika, dia mivoatra tsara. [...]
Vakio bebe kokoa: Manomboka ny vaksiny any Mercer County